Daryeelka caafimaadka - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daryeelka caafimaadka warshadaha adduunka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin joogitaanka onlaynka ah iyo xalalka ku saleysan shabakadda si ay u kala duwanaadaan adeegyadooda. Xalka mobilada ayaa caawiya daryeelka caafimaadka Xirfadlayaashu waxay helaan warqadda caafimaadka iyo dib -u -eegista bukaannada, waxay cusboonaysiiyaan faahfaahinta ogaanshaha bukaannada, waxay la tashadaan qaababka dawooyinka, iyo isku -xidhnaanta xogta la xiriirta waaxyada isbitaalka, iyada oo aan lahayn xiriiryo fiilo leh. Xalalka noocan oo kale ah ee mobilada ayaa abaabulaya saadka, maareynta faahfaahinta bukaanka, maareynta diiwaanka caafimaadka, diiwaangelinta biilasha, diiwaanka dhakhtarka waxayna siineysaa isdhexgal nidaamyada BI iyo CRM taas oo u oggolaaneysa shaqaalaha isbitaalka inay soo qabtaan oo ay helaan macluumaadka inta ay socdaan iyagoo aan dib u dhigin wax go'aan ah iyo tallaabo ah oo la sugayo.
Waxa aan ku qabano NEWGENAPPS
Newgenapps waxay bixisaa noocyo kala duwan oo caado ah design adeegyada ku habboon isbitaalkaaga iyo daryeelka caafimaadka baahiyaha nidaamka xaddidan. Waa nala shahaado Amazon Bixiyaha Adeegyada Shabakadda, kaas oo caawinaya daryeelka caafimaadka bixiyeyaasha adduunka oo dhan waxay bukaankooda u fidiyaan daryeel la hagaajiyay. Adeegyadu waxay gacan ka geystaan ​​yareynta waqtiga si loo socodsiiyo culeyska shaqada ee jira waxayna siiyaan marin u helka awoodaha gorfaynta iyo astaamaha.
Xirfadeena lagu dejiyay warshadaha daryeelka caafimaadka
Shakhsiga daryeelka caafimaadka meel kasta oo adduunka ah
Adag wadaagga xog wadaag
Nidaamka kormeerka fulinta waqtiga dhabta ah ee Isbitaalka
Nidaamka maaraynta faahfaahsan ee bukaanka
Caafimaadka maamulka xogta